အလုပ်နှင့်နေ့စဉ်အိမ်ထောင်စုအိမ်မှုဝေယျာယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်စွမ်းအင်တွေအများကြီးကိုတက်ယူပါ။ စုံတွဲများထက်ပို 80% များအတွက်အတူတကွနေထိုင်ခြင်း၏နှစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးမှိုင်းနှင့် everydayness ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Alas, ဒီလိင်၏မှန်သည်။ လိင်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍသောကြောင့်, သူ monotonous ထွန်းတောက်မဟုတျကွောငျးအရေးကြီးပါသည်။ စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးအပြည့်အဝပုံမှန်လိင်မိတ်ဖက်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်ဆိုသညျကား, နှင့်အပြင်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တင်းမာမှုသက်သာရာရစေဖို့ကူညီပေးသည်။
တစ်ဖက်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်တော့ယခင်အပျော်အပါးကယ်နှုတ်တော်မူသောအခါ, သင်ပြုမူဆောင်ရွက်ရပေမည်။ လိင်ဘဝမျိုးစုံဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာထိုမိန်းမသည်သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်သည်သူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မသေခဲ့ဘူးစိတ်ဝင်စားပါက sexy အတွင်းခံ, ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သေချာဆံပင်၏အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, လက်သည်းများနှင့်အသားအရေစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလောင်းတွေထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အချိန်ကိုလုပ်ရပါမည် - ထိုချွေးပေါင်းအိမ်မှခရီးစဉ်များ, ရေကူးကန်, ရေအားလျှပ်စစ်-နှိပ်ခံခြင်းနှင့်အလှပြင်ဆိုင်နှင့် Self-တန်ဖိုးထားမြှင့်တင်သငျသညျအဆင်းလှခံစားရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒုတိယအ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရန်သင့်အားလိင်လိုတောက်ပခဲ့ကြပါတယ်။ များစွာသောမိန်းမတို့မိသားစုဘဝနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏နိုးထဖို့အထောက်အကူပြုမထားဘူးသောအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲအလွန်ပင်ပန်းကြသည်။ သို့သော်သင်တစ်ဦးမေတ္တာပါသောဆက်ဆံရေးအတွက်ညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အလုပ်မှာအားလပ်ချိန်အတွင်းမှာလိင်စဉ်းစား, ခေါင်း၌သင်တို့၏တှငျးခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ် scroll ။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ - sexy ခံစားရဖို့။
တတိယအချက်မှန်မှန်သင့်ရဲ့ image ကိုပြောင်းပေးပါ။ အဆိုပါ monotony ၏လျင်မြန်စွာပင်ပန်းလူတို့သညျ။ နှင့်ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းနှင့်အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအမြဲတမ်းအလိုရှိ၏။
ငါတို့သည်သင်တို့လိင်ဆက်ဆံခြင်းမျိုးစုံမှကူညီပေးပါမည် 10 နည်းစနစ်ပူဇော်:
တက်ကြွဖြစ်လာသည်။ အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု Be နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးသို့နှိုးဆော်ခြင်း။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းများကိုကြိုးစားကြဖို့မိတ်ဖက်ရှိသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အရင်းနှီးကုန်စည်စတိုးဆိုင်၏ sexy ဝတ်စုံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။
စမ်းသပ်မှု။ လိင်အသစ်သောအရာတို့ကိုကြိုးစားရန်မကြောက်ပါနှင့်။ Initiative နှင့်သင့်မိတ်ဖက်အံ့သြ။
မမျှော်လင့်ဘဲနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောသောနေရာများအတွက်လိင်ရှိသည် - ကားထဲတွင်ပန်းခြံထဲတွင်ရုံးနှင့်အခြားမည်သည့်အလိုအလျောက်က်ဘ်ဆိုက်များတွင်။
ပါးစပ်လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ပါးစပ်လိင် maddening အများစုမှာယောက်ျား။
တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညနပေိုငျးစီစဉ်ထားပါ။ တနေ့အလုပ်ပြီးနောက်အနားယူကိုကူညီမယ့်ရင်ခုန်စရာ setting ကိုအတွက်အလင်းကိုညစာနှင့်စပျစ်ရည်တစ်ခွက်။
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ အသက်တာ၌တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမှတ်ရစရာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်လေး embody ဖို့ကြိုးစားစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်။
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူပရောပ။ သငျသညျနှစျပေါငျးမြားစှာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြရင်တောင်ပရောပစျြလြူရှုမရသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်, သူ့အဘို့ ထပ်. အတင်းအကြပ်စားဆင်ယင်ခြင်း, ပရောပသွေးဆောင်။
အခါအားလျော်စွာမပါဘဲငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ မိတ်ဆွေကုမ္ပဏီအတွက်သုံးစွဲရက်အနည်းငယ်, မိသားစုထံမှလုပ်ရတဲ့လွတ်မြောက်ရန်နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးလတ်ဆတ်ကြည့်ယူခွင့်ပြုပါ။
မိတ်ဖက်မတူညီလိင်မှန်မှန်စမ်းသပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား, ကွဲပြားခြားနားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိစိတ်ကိုနူးညွတ်ပိုနှစ်သက်ရသောမိသားစုယူနစ်။ တောင်မှလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ 20 နှစ်ကြာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
ခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက် - အိပ်မက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ထိုသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သနည်း
ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ရိုးရိုးဖြစ်ပေါ်စေသည် - ဘယ်သူ bi များမှာ
မာရိုင်ကယ်ရီနဲ့ James Packer သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပြိုလဲအကြောင်းကိုကောလာဟလ၏နောက်ခံဆန့်ကျင်သူတို့ကဒဏ်ငွေဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ
မက္ကစီကို - လများကရာသီဥတု
ရော်ဘီဝီလျံတက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ... တတိယကလေးအထင်!
သစ်ကြံပိုး - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံက papillomas - ကိုအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များစုဆောင်းမှု
Guriev ဂျုံယာဂု - စာရွက်
နီကိုးလ် Scherzinger နှင့်ရိုင်ယာကယ်ရီဘာကူရှိ "ဖော်မြူလာ 1" လည်ပတ်ခဲ့